आजबाट ‘आमा’ दर्शकको हातमा
चलचित्र ‘आमा’ आयो है ?
आजबाट प्रदर्शनमा आयो । हामीले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण तयारीहरु पुरा गरेर ‘आमा’ लाई दर्शकको हातमा छाडेका छौं । दर्शकले चलचित्रको ट्रेलरलाई जसरी मन पराउनु भएको थियो । ट्रेलरले एउटा हाइप बनाएको छ । ट्रेलर हेरिसकेपछि दर्शकमा चलचित्र प्रति एउटा उत्साह देखिएको थियो । त्यो किसिमले गर्दा हलहरुमा एउटा उत्साह देखिन्छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्थ छु । ट्रेलर हेरेपछि दर्शकले चलचित्रबाट जुन किसिमको आशा राख्नुभएको छ, त्यो चलचित्रले पुरा गर्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
तपाईको अन्य चलचित्रहरु भन्दा ‘आमा’ केही फरक छ भन्ने पनि सुनिन्छ ?
यो नेपाली चलचित्र हो । एउटा मौलिक चलचित्र हो । चलचित्रमा अहिले समाजमा भईरहेको कथा व्यथा छ । यसलाई मैले भन्ने शैली र कथाहरु त पक्कै फरक नै छ । म एउटा निर्देशकको हिसाबले कुनै पनि चलचित्रमा नयाँ कुराहरुको प्रयोग गर्न खोजिरहेको हुन्छु । ‘आमा’ लाई फरक या भिन्न भन्दा पनि एउटा राम्रो मन छुने चलचित्र भन्न चाहन्छु ।
तपाई आफैं चलचित्रको स्किृप्ट लेख्नुहुन्छ, यसको तयारी कसरी भयो ?
मलाई स्किृप्टको तयारीमा धेरै कुराहरुले असर गर्छ । स्किृप्ट तयारी गर्दा दुईवर्ष देखि मैले मेरो टाउकोमा अनेकन कुराहरु बोकेर हिडिरहेको हुन्थे । हामीले कुनै पनि चलचित्र गर्दा आजको भोली नै स्किृप्ट तयार गर्न सकिँदैन र त्यो सम्भव पनि हुँदैन । मैले मेरो दिमागमा दुईचार वर्ष अघिबाट घुमिरहेका कुराहरु जोडजाड गरिरहेको हुन्छु र एउटा समय आएपछि त्यसले स्किृप्टको रुप लिन्छ । चलचित्र ‘आमा’ पनि त्यस्तै हो । तीन वर्ष अगाडिबाट सम्झिरहेको कुराहरुलाई चलचित्रमा उतारेको हुँ ।
तपाई अन्य निर्देशक भन्दा केही अलग पनि हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ ? के हो कुरा ।
यसमा अलग भनेको, मैले कहिले एउटै किसिमको चलचित्र बनाएको छैन । मैले गर्ने चलचित्रमा जहिले पनि कथा, कलाकार र अन्य कुराहरु म भिन्न नै दिन खोज्छु । म दर्शकलाई केही नयाँ कुरा दिन पाउँ भन्ने आशा राख्छु । त्यसैले पनि दर्शकहरुले यस्तो खोज्नु हुन्छ होला र त्यो स्वभाविक नै हो । मलाई समाजमा लुकेका केही अध्यारो पाटोहरुलाई खोतल्न मन लाग्छ । यही कारणले दर्शकहरुले मेरो चलचित्रमा केही फरक र सत्यतथ्याका कुराहरुलाई हेर्न पाउनुहुन्छ । त्यसैले दर्शकहरुले मलाई अन्य भन्दा केही अलग भन्नुभएको हुनसक्छ ।
दर्शकहरुले चलचित्र ‘आमा’ बाट कत्तिको आशा गर्ने त ?
यसमा आशा राख्ने नराख्ने भन्दा, एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ । अहिले साच्चै भन्ने हो भने धेरै समय भईसक्यो दर्शकहरुले मनछुने राम्रो चलचित्र हेर्न नपाउनुभएको । त्यसले अवश्य नै एउटा राम्रो मौलिक कथा बोकेको नेपाली चलचित्र हेर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईको मेरो हामी सबैको कथा हुनसक्छ । चलचित्र ‘आमा’ ले त्यो अवश्य पुरा गर्छ ।
बलिउड निर्देशक प्रकाश झासँग भेट भयो कि भएन ?
मलाई निमन्त्रणा आएको थियो तर चलचित्र प्रदर्शनको हप्ता यस्तो हुन्छ कि खान र साँस फेर्ने फुर्सद पनि नभएको जस्तो हुन्छ । यसकरणले म जान पाईन । एकदमै दुख लागेको छ ।
उहाँबाट हामीले के सिक्ने त ?
चलचित्रको लागी पुरानो फिल्म मेकरले केही कुराहरु व्यक्त गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैको लागी फाइदाजनक हुन्छ । उहाँको भोगाई उहाँले गरेका कथाहरु । तर मलाई हामीले आफनो लागी आफैंले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । केवल पढाई र सिकाईले मात्र पुग्दैन । एउटा निर्देशकले कुनै चलचित्र बनाउँछ कुनै कथाहरु खोज्छ भने त्यो नितान्त उसको हुन्छ । त्यसलाई कसरी भन्ने गर्ने त्यो उसको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । उसले आफनो कथा या भनौं उसलाई लागेका कुराहरु जसरी नी भन्न सक्छ । आखिर हामी मानवलाई त व्यक्तिले नै बनाएको हो । एउटा नयाँ निर्देशकले पनि अर्को नयाँलाई बनाउन सक्छ । अरुबाट कुराहरु सिके पनि अन्तमा हामीले देखाउने भनेको आफनो खुबी नै हो । मलाई यसमा आफनो खुबी नै झल्किनु पर्छ जस्तो लााग्छ ।
चलचित्र निर्माता अर्जुन कुमारसँग काम गर्नुभयो । अहिले शर्मिला पाण्डेसँग मिलेर काम गरिरहनु भएको छ ? अब यसपछि को ?
शर्मिला जी र हामी एउटा स्टुडियोको माध्यमबाट अघि बडिरहेका छौं । हामी पार्टनरको हिसाबले काम गरिरहेका छौं । स्टुडियोको माध्यमबाट वर्षको तीन देखि चारवटा जति चलचित्र बनाउने भनेर हामीले काम शुरु गरेका छौं । मैले बाहिरको चलचित्रहरु त्यति नगरेका कारणहरु पनि यही नै हो । आफनै चलचित्रहरुलाई समय दिन पाईरहेको छैन अरुको कसरी भ्याउन सकिन्छ र । शर्मिला जी र हामी चलचित्रलाई केही भिन्न हिसाबले लिएर जाने भनेर लागेका छौं । अब यतीवटामा टुगिंन्छ, शर्मिला जी पछि को भन्ने त कुरै आउँदैन । यो छोटो अवधीको लागी होइन धेरै लामो समयसम्म नै जान्छ ।
चलचित्र ‘आमा’ पछि के बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
यसपछि अहिले केही पनि सोचेको छैन । दिमागमा त धेरै कुराहरु खेलिरहेको हुन्छ । मेरो बानी कस्तो छ भने म जुन दिन त्यो गर्छु भन्छु, त्यही दिन मात्र त्यो भन्छु । अहिले ‘आमा’ बाहेक दिमागमा केही पनि छैन ।